Mapụtara Parts Factory - China mapụtara Parts Manufacturers na Suppliers
Bọọlụ zuru ụwa ọnụ
Huzhou YUANTUO bụ a n'ibu injinịa ụlọ ọrụ ọkachamara R & D, imewe na imewe nke nile di iche iche nke njem akpaaka na ngwá, lọjistik nchekwa na akụrụngwa na akụkụ. Azụmaahịa ahụ gụnyere imewe na imepụta ụdị igwe ọ bụla na akụkụ ahụ mapụtara, njikọ na mkpokọta nke ọtụtụ igwe, yana nyocha ubi, atụmatụ na mmepe nke injinịa usoro. Manufacturing apụtakarị na a pụrụ ịdabere na n'ibu akụrụngwa bụ anyị ọrụ ...
leveler maka ebu
Akụkụ nke ngwaahịa iko ụkwụ: 1. Ngwaahịa: a na-eji ngwaahịa carbon, ngwaahịa ahụ eme ihe (na zinc / nickel / chromium / blackening / pulse paint) ma ọ bụ 202/304 igwe anaghị agba nchara 2. Nha ngwaahịa: nha ngwaahịa: enwere ike ịhọrọ ya dịka ọdịdị nke eserese a. 3. Ihe eji eme ihe: usoro ngwaahịa a dabara adaba maka igwe ọ bụla dị arọ, igwe nri, akụrụngwa ọgwụ, kọfị, wdg. 4. Uru ngwaahịa: ngwaahịa a nwere ikike dị elu, c ...
Fulailun usoro ngwaahịa ndị obere na ìhè na ibu ibu, adabara erute ngwongwo na ewepụghị ike. A na-ejikarị ya eme ihe na akụkụ gbagọrọ agbagọ nke usoro nnyefe ma ọ bụ akụkụ nke ntụgharị na nkwukọrịta, a pụkwara iji ya dị ka onye nche ma ọ bụ nduzi n'akụkụ abụọ nke onye na-ebufe. Fulai pole na-eji maka casters, nke nwekwara ike igwu inyeaka ọrụ na ọtụtụ conveyors, dị ka arịgo ngalaba nke ịrị belt ebu ka pịa belt, wdg Na nzukọ akara, Fulai wheel bụ w ...